Maxaabiis Falastiina oo ku xirnaa jeelka Yuhuuda ugu adag oo si layaable uga fakadey - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Jalbuus waa jeelasha Yuhudu ku faanto ee ugu adag inta badan ay ku xiraan dadka reer Falastiin ee diidan gumeysiga reer galbeedka ku hayo muddo 50 sano ak badan. Dagaalkii labaad ee aduunka kadib ayay ahayd markii Yuhuud badan la soo dejay dhulka reer Falastiin.
Yuhuudan oo taageero xoogan ka helaysa Maraykanka iyo wadamada Yurub qaarkod ayaa si xoogan loo hubeeyay waxayna markiiba qabsadeen dhulki barakaysnaa maadaama Carabat iyo reer Falastiin ayna haysan hub ku filan.
Inkastoo markii dambe Ruushku si fiican u caawiyay haddana fuleynimada Carabta waxa ciidankii Masar hore u socon waayay dagaalkii 1973 waxa kadibna la jabiyay ciidankii Suuriya oo keli ku noqday inkastoo Ciraaq ka soo gaartey.
Haddaba Jeelkan oo Falastiin badan ku xirneyd ayaa waxa ka baxsaday ku dhawaad 6 ka mida kadib markii ay hog dheer ka qodeen ugana baxeen meel dibeda ka ah jeelka. Waxa lagu war helay markii qof marayay uu la soo xiriiray askarta ilaalada.